Tsy lahatry ny fiainana izany, fa setrasetran-dehilahy: Fahatezerana ao Però noho ny famonoana ilay vehivavy 22 taona · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Jona 2018 5:38 GMT
Vakio amin'ny teny English, Ελληνικά, Français, русский, Deutsch, 日本語, Italiano, Español
Tao anatin'ny fotoana fohy, nibahana tamin'ny pejy voalohan'ny fampitam-baovao Peroviana i Eyvi Liset Ágreda Marchena, 22 taona. Tamin'ny 24 Aprily no nivoaka voalohany ny tatitra fa notondrahan'ny lehilahy iray solika izy ary nodorany avy eo rehefa nody avy niasa nandeha fiara fitateram-bahoaka, namoy ny ainy izy noho ny fahamaizana goavana izay nikasika ny 60% ny vatany.
Mpiara-miasa amin'i Ágreda taloha antsoina hoe, Carlos Javier Hualpa Vacas no nahavanon-doza, ary voalaza fa nanorisory azy nandritra ny herinandro maro. Rehefa nandà ny heloka vitany i Hualpa tany am-boalohany, dia niaiky ihany nony farany fa izy no nahavanon-doza izay nitarika ny fahafatesan'i Ágreda.
Tamin'ny fanambaràny, nilaza i Hualpa fa nanondraka solika an'i Agreda ary nandoro azy avy eo “satria nahatsiaro fa nohararaotin'i Ágreda izy”. Nilaza i Hualpa fa tsy maintsy nomena lesona i Ágreda satria nananany trosa:
Nilaza i Hualpa fa te-hanondraka solika eo amin'ny tarehiny fotsiny, saingy nanomboka nandeha ny fiara fitateram-bahoaka dia nararany teo amin'ny vatany manontolo. Nisy mpandeha hafa tratran'ny fanafihana ihany koa.
Nandritra izany, tsy maintsy natao fandidiana maromaro i Agreda mba hanesorana ny tamba-tsela nekrôtika sy hanaovana grefy amin'ny vatany. Nasiana fampatoniana i Ágreda mba tsy hahenoany fanaintainana amin'ny ratrany, ary notazonina tamin'ny fifohana rivotra tamin'ny fomba artifisialy izy. Tamin'ny 17 May, voalaza fa nahatsiaro tena izy ary niresaka tamin'ny havany, nanontany azy ireo raha afaka mody any an-trano izy. Amin'ny ankapobeny, nandalo fandidiana 12 i Ágreda tao anatin'ny iray volana mahery monja.
Ny 1 Jona, nanohina ny firenena ny vaovao fahafatesan'i Ágreda. Nikarakara diabe ho an'izany tamin'io tolakandro io ihany ny vondrona “Ni una menos” (Tsy misy iray tavela):
Tao amin'ny Twitter, lohahevitra nalaza ny tenirohy #EyviAgreda, #PorEyviPorTodas (Ho an'i Eyvi, ho antsika rehetra) sy ny hatezerana goavana amin'ny ankapobeny ary koa ny #NiUnaMenos (Tsy misy vehivavy iray tavela) izay efa naparitaka teo aloha:
Ity graffiti ity dia manondro ny fanehoan-kevitry ny filoha Martin Vizcarra mikasika ny fahalasanan'i Ágreda, izay nanambara fa “indraindray, lahatry ny fiainana ireo“. Taty aoriana, nanazava i Vizcarra, izay voatsikera mafy tamin'ny fanambarany fa tsy miresaka momba ny herisetra izy fa kosa manao fanehoan-kevitra fa tsy ahafahan'ny dokotera manavotra ny ainy ny lahatry ny fiainana.
Ankehitriny, olana goavana eo amin'ny fiarahamonina Peroviana ny famonoana vehivavy sy ny herisetra mihatra aminy. Namintina ny Fanadihadiana momba ny Fampandrosoana sy ny Fahasalaman'ny Fianakaviana (ENDES 2017) fa enina amin'ireo vehivavy Peroviana folo no miaiky fa niharan'ny herisetra nataon'ireo sakaizany na vadiny. Na dia nahitana fihenana ho 65,4% aza ny isanjaton'ny vehivavy niharan'ny herisetra tamin'ny dimy taona farany raha 71,5% izany teo aloha, hita fa mbola atahorana ny tarehimarika. Efa-bolana monja tamin'ny taona 2018, tranga 40 mahery famonoana vehivavy no notaterina tany Però, niakatra 26% raha oharina tamin'ny taona 2017 tamin'ny fotoana toy izany.